နှလုံးသားရပ်ဝန်းမှ အသံများ...။: October 2009
Universal Free Photo Booth (ရုံးချိန်အတွင်း မကြည့်ရ။)
ဒီတစ်ခေါက်တော့ ဘဝအမောလေး ပြေစေဖို့ ဗွီဒီယိုလေးတွေ တင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်။ အသံလေးနဲ့ တွဲကြည့်မှ ရယ်ရမှာပါ။ ရုံးချိန်အတွင်း မကြည့်မိဖို့ သတိပေးပါရစေ။ အသံထွက်ရယ်မိလို့ မန်နေဂျာကြီး မျက်ထောင့်နီနဲ့ လာကြည့်ရင် တာဝန်မယူပါ။
ရေးသားသူ Ko Boyz at 11:57 PM6ယောက်က ရေးချင်တာတွေ ရေးခဲ့တယ်...။
ရေးသားသူ Ko Boyz at 2:51 PM9ယောက်က ရေးချင်တာတွေ ရေးခဲ့တယ်...။
ရေးသားသူ Ko Boyz at 4:09 PM 11 ယောက်က ရေးချင်တာတွေ ရေးခဲ့တယ်...။
အများတကာ မျှော်လင့်နေကြတဲ့ Windows OS7ကို ယနေ့ ကြာသပတေးနေ့မှာပဲ မိုက်ကရိုဆော့ဖ် ကုမ္ပဏီကနေ တရားဝင် ဖြန့်ချိလိုက်ပါပြီ။ ဖြန့်ချိတဲ့ရက် မတိုင်ခင်က ပိုင်းရိတ်ဗားရှင်းများ အင်တာနက်မာ ပလူပျံနေတာ တစ်ပတ်လောက် ရှိပါပြီ။ ဒီတစ်ပတ်ထဲမှာ ဒေါင်းလုဒ် အများဆုံး လုပ်တဲ့ စံချိန် တင်သွားပါတယ်။ ဘာတွေ ထူးခြားလဲ ဆိုတာတော့ စမ်းသပ်ပြီးမှ သုံးသပ်ချက်များ ထွက်လာမှ ထပ်မံရေးသားပေးပါ့မယ်။ လောလောဆယ် ပြောနိုင်တာကတော့ အရင် ဝင်းဒိုးများသည် ကွန်ပြူတာတွက်ချက်မှု စွမ်းရည် 64 bit ကို အပြည့် မသုံးပဲ 32 bit သာ သုံးထားပါတယ်။ အခု ဝင်းဒိုး အသစ်မှာတော့ ကွန်ပြူတာပရိုဆက်ဆာရဲ့ တွက်ချက်မှု စွမ်းဆောင်ရည် 64bit ကို အပြည့် သုံးထားတဲ့ အတွက် မိမိတို့ ကွန်ပြူတာ စွမ်းဆောင်ရည်ကို တင်းပြည့်ကျပ်ပြည့် သုံးနိုင်ပြီလို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ (တစ်ချို့ကတော့ ဒီ Windows7ကို Vista အရည်ခွံခြုံထားတဲ့ Windows XP လို့ ဝေဖန်ကြပါတယ်။)
အချို့သော ဝင်းဒိုး အသစ်ဖြန့်ချိတဲ့ သတင်းများကို ဒီနေရာတွေမှာ ဖတ်နိုင်ပါတယ်။
- Microsoft Windows7vs. Apple Snow Leopard
- It's Official: Microsoft Launches Windows 7
ရေးသားသူ Ko Boyz at 5:11 PM3ယောက်က ရေးချင်တာတွေ ရေးခဲ့တယ်...။
- ပန်းသီးကုမ္ပဏီ ဈေးချနေသည်။ အကျယ်ကို ဤနေရာတွင် ရှု။
- ဂူဂယ်မှ ဖုန်းအတွက် OS ကို eClair ဆိုလား နာမည်ပေးထားသည်။ Android 2.0 ဟုလဲ ခေါ်ဆိုသည့် ဖုန်း OS အသစ် ထပ်ထွက်သည်။အကျယ်ကို ဤနေရာတွင် ရှု။
- ဆိုနီ အဲရစ်ဆန်မှ X3 ဖုန်း အဖြစ် ထုတ်လုပ်နိုင်သော Rachel သည် Android OS ကို သုံးထားသည်။ ယင်းကို ယခုအခါ X10 ဟု အမည်ပေးမည် ဖြစ်ကြောင်း ထပ်မံ၍ ကောဠဟလ ထွက်လာ။ အကျယ်ကို ဤနေရာတွင် ရှု။
- မိုဘိုင်းဖုန်းဈေးကွက်တွင် နေရာယူထားသော WinMo မှ ၆.၅ ဗားရှင်းပင် မထွက်သေး။ WinMo7ကို ထုတ်လုပ်ရန် microsoft က ကြံနေသည်ဟု အတွင်းသတင်းများရ။ အကျယ်ကို ဤနေရာတွင် ရှု။
- ဂူဂဲလ်မှ Apple iTunes ကဲ့သို့ အွန်လိုင်းတေးဂီတ ဈေးကွက် ဖေါ်ဆောင်မည်ဟု သတင်းသန့်သန့်ရ။ အကျယ်ကို ဤနေရာတွင် ရှု။
ဤတွင် ဆားချက်၍ ပြီး၏။
ရေးသားသူ Ko Boyz at 11:59 PM5ယောက်က ရေးချင်တာတွေ ရေးခဲ့တယ်...။
၁။ POSB Bank Card
၂။ S-Pass Card
ပိုင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်း အထောက်အထား (ပါတ်စ်ပို့တ်၊ ကျောင်းသားကဒ် အစရှိသည်) နှင့် အောက်ပါ ဖုန်းနံပါတ်သို့ ဆက်သွယ်၍ သွားရောက်ထုတ်ယူနိူင်ပါသည်။
မိုဘိုင်း - ၈၃၅၀ ၄၉၅၈
(ကောက်ရသူအား မုန့်ကျွေးပါလေ။ ဘလော့ပိုင်ရှင်ကို ကျွေးချင်သည် ဆိုပါက လူ့ကျင့်ဝတ်နီတိအရ ဖိတ်ခေါ်ချက်ကို မငြင်းဆန်သင့်သဖြင့် အားနာစွာ လိုက်လျောပါမည်။)
ရေးသားသူ Ko Boyz at 3:08 PM2ယောက်က ရေးချင်တာတွေ ရေးခဲ့တယ်...။
ရေးသားသူ Ko Boyz at 11:49 PM 25 ယောက်က ရေးချင်တာတွေ ရေးခဲ့တယ်...။
စနေနေ့ညက သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်က အပေါင်းအဖော်များနဲ့ စုံစုံလင်လင် တွေ့ချင်တယ်ဆိုလို့ Sembawang Park ကို တွေ့ဖို့ သွားကြပါတယ်။ အတီးအဆိုမပါပဲ. သူငယ်ချင်းများနဲ့ အစားသောက်များသာ သက်သက် ပါတဲ့ ပွဲလေး တစ်ပွဲပါ။ အဲဒီချိန်းဆိုထားတဲ့ နေရာကို မသွားခင်မှာ တစ်ယောက်က မှာလို့ လာဗဲန်းဒါး နားက ဂိုးဒန်းမိုင်းက ယိုးဒယား စားသောက်ဆိုင်မှာ ကြက်အရေခွံကြော် ဝင်ဝယ်ပါတယ်။ နောက် အဲဒီကနေ တစ်ဆင့်ဆမ်ဘားဝမ်ကို အမ်အာတီနဲ့ ဒိုးပါတယ်။ ဆမ်ဘားဝမ် အမ်အာတီ ရောက်တော့ တက်စီနဲ့ ထပ်သွားပါတယ်။ ဘတ်စ်ကားတွေ သွားတာ ရှိပါတယ်။ နောက်ကျနေလို့ တက်က်စီနဲ့ သွားတာပါ။ ဟိုရောက်တော့ လူတော်တော်စုံပြီး တော်တော်လေးလဲ ခရီးရောက်နေကြပါပြီ။ ကိုယ်လဲ အမှီလိုက်မယ်လဲ ကျန်ရော.. လမ်းဆုံးဘူတာ ဆိုက်ပါပြီတဲ့။ ဟတ်ကော့ကြီး ကျန်ခဲ့တယ်။ ဒါနဲ့ ကျန်တဲ့ အစားဘက်ကို လှည့်ကြတာပေါ့။ ကြာဇံကြော်နဲ့ ဝက်သားတုတ်ထိုးတဲ့။ ဝက်သားတုတ်ထိုးကတော့ အိုးသူကြီး စပါယ်ရှယ်လစ်စ် ကယ်လ်ဗင် လုပ်လာတာလေ။ ဒီညတော့ ကြာဇံကြော်ည မဟုတ်ပဲ ဝက်သားတုတ်ထိုးည ဖြစ်သွားခဲ့တယ်။ အချင်း၊ အူတိုင်၊ နားရွက်၊ အစာအိမ်၊ လျှာ၊ မျက်လုံး စသဖြင့် အင်္ဂါရပ်များ စုံလင်စွာပါဝင်တဲ့ ဝက်သား တုတ်ထိုးပါ။ အချဉ်ကလဲ ကိုယ်တိုင် လုပ်လာတဲ့ အတွက် ဝမ်းတော်လားမှာကို စိုးရိမ်စရာ မလိုပါ။ အချိုတည်းဖို့ကတော့ ဖရဲသီးတွေ ပါတယ်။
အချုပ်ဆိုရရင်တော့ ဗော့ဒ်ဂါကို ဆန်းကစ်နဲ့ ရောလိုက်တဲ့ ညလေး တစ်ညပေါ့လေ။
ဒီလိုညလေး ပြန်ကြုံချင်သေးတယ်။ ကျေးဇူး ကိုဟိုးမား
မုဒိတာပွားလို့ရအောင် ဖုန်းကင်မရာလေးနဲ့ ရိုက်လာတဲ့ ပုံလေးတွေ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဝါးတား မှုန်တုန် မကြည်လင် မပြတ်သားမှုများကို ဖယ်ပြီး ကြည့်လိုက်ရင် ဝက်သားတုတ်ထိုးဆိုတာ တွေ့ပါလိမ့်မယ်။
သိပ်တောင် မကျန်ချင်တော့ဘူး။ ရောက်တာ နောက်ကျသွားလို့...။ ဒါပေမယ့် အစုံတော့ စားရသေးတယ်။ မျက်လုံးက ဘယ်သူ စားသွားလဲ မသိဘူး။
ဒီဗန်းထဲက အူတိုင်တွေ အချင်းတွေ ကြက်ဥတွေနဲ့ပဲ ကျန်တော့တယ်။ လျှာက သတ်သတ်ဖွက်ထားတယ် ထင်တယ်။ ဘယ်ရောက်သွားပါလိမ့်။ ခုနက စားနေတုန်း....။
ဖရဲသီးလေးတွေ စားပါဦး။ ဆန်းကစ်ခွက်က အထဲမှာ ဆန်းကစ်ယောင်ဆောင်တဲ့ ဗော်ဒကာ ပါတယ်။
ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ Angle ကနေ ကြည့်ချင်ရင် ကြည့်နိုင်အောင် Direct cut အနေနဲ့ ရှုထောင့်စုံစုံကနေ တင်ပြလိုက်ပါတယ်။
အလင်းများသွားလို့ နည်းနည်း ရောင်ပြန် များသွားတယ်။
ရေးသားသူ Ko Boyz at 12:41 PM 8 ယောက်က ရေးချင်တာတွေ ရေးခဲ့တယ်...။
ရေးသားသူ Ko Boyz at 1:36 AM 13 ယောက်က ရေးချင်တာတွေ ရေးခဲ့တယ်...။
ဒီမနက် ကြက်သား ထောပတ်ထမင်း စားဖြစ်တယ်။ မစားဖြစ်တာ ကြာလို့လား မသိဘူး။ စားကောင်းကောင်းနဲ့ စားလိုက်တာ နှစ်ပန်းကန်တောင် ကုန်တယ်...။ လောလောဆယ် ဗိုက်ကြီးက တင်းကားနေတော့ အိပ်ချင်နေတယ်။
ကြက်သားကို ရှယ်နူးနေအောင် ချက်ထားတယ်။ အနှစ်များများ ပါတယ်။
ထောပတ်ထမင်းက ဆန်ခြင်ထည့်တာ နည်းနည်းများသွားလို့ မနပ်တာနဲ့ နှစ်အိုးခွဲထည့်လိုက်တယ်။ ဖာလာစေ့တွေ ၊ အမွှေးအကြိုင်တွေ၊ အခေါက်တွေ၊ သပျစ်သီး ခြောက်တွေ ပါတယ်။ ကြက်သွန်ဥ ဥသေးလေးတွေ အလုံးလိုက် မြုပ်ပြီး ချက်တယ်။
ကြက်ခြေထောက်နဲ့ ရင်ပုံနားက အရိုးကိုကျတော့ ခုတ်ထစ်ပြီး ဟင်းရည်လုပ်လိုက်တယ်။
အအီပြေ သရက်သီးသနပ်လေး ရှိတယ်။ ကြက်သွန်နီကို အချဉ်ရည်ဆမ်းပြီး ငြုပ်သီး ပါးပါးလှီးထည့်ထားတဲ့ အချဉ်လဲ ရှိတယ်။
လောလောဆယ်တော့ ကမ္ဘ့ာအလေးဆုံး အရာကို ထမ်းထားရတယ်။
ရေးသားသူ Ko Boyz at 3:22 PM 10 ယောက်က ရေးချင်တာတွေ ရေးခဲ့တယ်...။
ကျွန်တော် သုံးနေတာ WalkMan Series လေ။
အလုပ်ပြီးမြောက်ဖို့က အဓိက။ ရေကူးကန်ထဲကို လှေကားချမရလဲ ရတာနဲ့ ဆေးသတ်မှာပဲ။ သေချာဆွဲထားကြ။
ယခုလအတွက် ပရိုမိုးရှင်း = ဓါတ်ဆီခွဲတမ်း မပေးပါ။
နောက်ထိုင်ကယ်ရီယာ မပါတဲ့ ဘီးကိုစီးမိရင် ဒီလိုပဲ ဖြစ်မှာပေါ့။
ဆွဲ..ဆရာရေ့ အတွယ်အတာတွေ များနေပြီ။ (လေးတောင် ကျိုးနေပြီလား မသိ။)
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဆီစားသက်သာတဲ့ ပို့ဆောင်ရေး လုပ်ငန်းတစ်ခုပါ။
အနည်းဆုံးတော့ သတိထားမိပြီး ကားအရှိန်နှေးသွားမှာပဲ။
ပြည်သူတွေအတွက် အလင်းရောင် ပေးစွမ်းနိုင်ရေးက အရေးကြီးတယ်။
ရေပူရေပေး စံနစ်တပ်ထားပေးပါတယ်။ ဉာဏ်ရှိသလိုသာ သုံးပါလေ။
အရေးပေါ် လူနာတင်ယာဉ် ဖြစ်ပါတယ်။
အီးမေလ်းထဲမှ ရရှိလာသော အချက်အလက်များကို ဝေငှခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
ရေးသားသူ Ko Boyz at 3:27 AM9ယောက်က ရေးချင်တာတွေ ရေးခဲ့တယ်...။
အီးမေးလ်နဲ့ ဖုန်းထဲကို ရောက်လာတဲ့ မက်ဆေ့ခ်ျတစ်ခုပါ။
Pandavacara ဆိုတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်က မြန်မာပတ်စ်ပို့ စာအုပ် တစ်အုပ် ကောက်ရထားပါတယ်တဲ့။ (ဘယ်လိုနာမည်ကြီးပါလိမ့်။)
ပိုင်ရှင်အစစ်အမှန်ကို တွေ့မိရင် အောက်က လိပ်စာအတိုင်း ပြန်ဆက်သွယ်ပေးပါ။
မြန်မာပတ်စ်ပို့ ဆိုတာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ တန်ဖိုး အကြီးမားဆုံးပဲ။
ပိုင်ရှင်တော့ မတွေ့မချင်း အတော်ကို စိတ်လေနေလိမ့်မယ်။
Pandavacara: Please be informed that i've got one Myanmar passport under name by Mr Win Swe Myint who is holding passport no 243641 .
Kindly pass this massage to all your kindness friends . Contact us @ 81802985. or 9734 1415
ရေးသားသူ Ko Boyz at 9:41 AM5ယောက်က ရေးချင်တာတွေ ရေးခဲ့တယ်...။
ရေးသားသူ Ko Boyz at 1:37 PM 12 ယောက်က ရေးချင်တာတွေ ရေးခဲ့တယ်...။
စနေနေ့ညက ပူလာအူပင်ကျွန်းကို ရောက်ခဲ့တယ်။ နောက်တစ်ရက်မှာ ပြန်လာတယ်။ မပြန်ခင်မှာ တစ်မနက်လုံး ကျွန်းအနှံ့ စက်ဘီးစီးတယ်။ နေ့လည်ခင်း မောတော့ လှေဆိပ်ကို ပြန်တယ်။ ထမင်းဝင်စားကြတယ်။ အရင်ဆုံးရောက်လာတဲ့ ဟင်း၂ မျိုးကို ဆာဆာနဲ့ စားကြတာ ထမင်း ၃ပွဲ လိုက်ပွဲယူဖြစ်တယ်။
ကန်စွန်းရွက်ကြော်ပါပဲ။ ပဲငပိစပ်စပ်လေးကို ဘာလချောင်နဲ့ ချက်ထားတာ။
ပုဇွန်တင်ပူရာ။ ကွေကာအုတ်ကြော်ကို ဖြူးထားတယ်။
ရေးသားသူ Ko Boyz at 1:49 AM 11 ယောက်က ရေးချင်တာတွေ ရေးခဲ့တယ်...။
လွန်ခဲ့သော ၆ နှစ်ကျော်က MDD chat ကနေ သိခဲ့တယ်။
စေ့စပ်ထားတဲ့ ချစ်သူက လူကီးမီးယား ဖြစ်နေတယ်။
အဲဒီတုန်းက အော်တိုမေးရှင်း စက်ရုံတစ်ခုမှာ အလုပ်လုပ်နေတယ်။
ကျွန်တော့်ကို အွန်လိုင်းကနေတစ်ဆင့် ကျောင်းကိစ္စ၊ ယူရမယ့် ဘာသာတွဲကို တူတူ ရွေးပေးခဲ့တယ်။ (အဲ့တုန်းက တော်တော် အားနာသွားခဲ့တယ်။ ကျွန်တော်က သူ့ကို အွန်လိုင်းမှာ ထားပြီး မေ့ပြီး ချက်တင် ဝင်နေတာ။)
ဖိုရမ်မှာ ဝင်ရေး၊ ဝင်ဖတ်နေတာကို သူက သဘောမကျဘူး။
ရန်ကုန် အနောက်ပိုင်းက နာမည်ကြီး ခေတ်ဟောင်း စတီရီယို အဆိုကျော် နေတဲ့ ရပ်ကွက်မှာ နေတယ်။
အများအားဖြင့် သူနဲ့ ကျွန်တော် အီးမေးလ်နဲ့ပဲ အဆက်အသွယ် ရှိတယ်။
အဲ့တုန်းက ကျွန်တော်က ရုံးအီးမေးလ်အပြင် အလုပ်ကထွက်တော့ boyz@autospeed.com ဆိုတဲ့၊ ပုဂံက ပိတ်ဖို့ လေးနှစ်ကြာ မေ့နေတဲ့ မေးလ်ကို သုံးပြီး သူနဲ့ ဆက်သွယ်ဖူးတယ်။
နောက်တော့ ဘာအကြောင်းကြောင့်လဲ မသိဘူး အဆက်အသွယ် ပြတ်သွားတယ်။
တစ်ရက်သားကျတော့ သူက သွားကျိုးဆိုတဲ့ နစ်နဲ့ မေးလ်အကောင့်တစ်ခု ဖွင့်ပြီး ပြန်ဆက်သွယ်လာဖူးတယ်။ ကျွန်တော့်ကို ဆက်သွယ်ရတာ အတော်ခက်တယ်လို့ ညည်းတယ်။
ဒီတစ်ခေါက်မှာ သူ့သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ခရီးသွားနေတဲ့ ပုံတွေ ပို့လာတယ်။ (ပူလာအူပင်ကျွန်းကို အလည်သွားတယ် ထင်တာပဲ။ သူ တော်တော် ပြောင်းလဲသွားတယ်။ ပျော်လာတယ်လို့ ရိပ်မိတယ်။ သူ့အတွက် ဝမ်းသာလိုက်တာ။)
ဖြစ်ချင်တော့ ကျွန်တော် သုံးနေတဲ့ autospeed mail ကို ပုဂံက ပိတ်လိုက်တော့ သူနဲ့ အဆက်အသွယ် ပြန်ပြတ်သွားတယ်။
နောက်ပိုင်းမှာ autospeed မေးလ်ကို ဘန်းကျော်ကနေ ပြန်ကြည့်လို့ရတော့ အကောင့်က suspend ဖြစ်နေလို့ ပြန်ပြီး password အသစ်နဲ့ ဝင်ရတယ်။ မေးလ် အဟောင်းတွေ အကုန် ပျက်ကုန်တယ်။
အခုထိ အဆက်အသွယ် ပြန်မရတော့ဘူး။
ဒီနေ့မှ သူ့အကြောင်းတွေ မစဉ်းစားဘဲ ခေါင်းထဲ ရောက်လာတယ်။ ညီမလေးကို သတိရလိုက်တာ။
နာမည်မှာ စိုး ပါတယ် ထင်ပါရဲ့။ သတိရရင် မေးလ်ပို့ပါ။
ရေးသားသူ Ko Boyz at 12:01 AM 26 ယောက်က ရေးချင်တာတွေ ရေးခဲ့တယ်...။